စမဖုံးသေပီ Dead | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computer & Cell Phone » စမဖုံးသေပီ Dead
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Aug 12, 2013 in Computer & Cell Phone, Marketing | 16 comments
ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် အသစ်အဆန်း ဘာထွက်မလဲ မျှော်နေသူ စမတ်ဖုံးရူးများအတွက် ဒီနှစ်ဟာ စိတ်ပျက်စရာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုပြောတာ ဖုံးကောင်းကောင်းတွေ ထွက်မလာလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောကြေးဆို အများကြီးပါ… HTC One၊ BlackBerry Z10၊ Samsung Galaxy S4နဲ့ Moto X တို့ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ရှယ်ဖုံးတွေ ဝယ်မိသူတိုင်း နှစ်သက်ကြပါလိမ့်မယ်။
ပြောစရာရှိတာ အဲဒီဖုံးတွေကို ဘယ်လောက် အမွှမ်းတင်တင် ကြော်ငြာလုပ်လုပ် နည်းပညာ အလှည့်အပြောင်း ရယ်လို့ပြောဖို မရှိခြင်းပါ။ သူတို့အားလုံး ဒီပုတ်ထဲကဒီပဲ ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ ၂၀၀၇ခုနှစ်မှာ အက်ပဲလ်ကုမ္မဏီက အိုင်ဖုံးနဲ့ ခုန်ပျံကျော်လွှား အနိုင်ယူပြီး နောက်မှာတော့ သူ့ကို ပြိုင်ဖက်တွေ လိုက်မှီသွားကြတယ်။
အများစုအတွက် ဖုံးအားလုံးဟာ ပိန်မသာ လိန်မသာပါပဲ။ အက်ပလီကေးရှင်းတွေ သုံးလို့ရမယ်၊ အင်တာနက် တက်မယ်၊ မူဗွီကြည့်မယ်၊ အီးမေးလ်စစ်မယ်၊ ကန်ဒီခရပ်ရ်ှဂိမ်းတွေ မမောတမ်း ဆော့ကြမယ်။ ဖုံးကုမ္မဏီတွေ ဘယ်လိုပြောပြော၊ ဖုံးတန်ဖိုး ဘယ်လောက်ကြီးကြီး ပိုထူးမလာပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ အားလုံး အတူတူ ဆိုရပါမယ်။ “စမတ်ဖုံးခေတ် ကုန်သွားပါပြီ။”
မိုဘိုင်းလ်ဖုံး တီထွင်မှုတွေကို စောင်ကြည့်တဲ့အခါ လွန်ခဲ့တဲ့ခြောက်နှစ် အက်ပဲလ်ကုမ္မဏီ လုပ်ခဲ့တာကိုပဲ ဖုံးကုမ္မဏီများ လိုက်လုပ်နေတာ စိတ်ပျက်စရာ တွေ့ပါတယ်။ မရယ်ရတဲ့ ပျက်လုံးတခု သာသာပါပဲ..။
လွန်ခဲ့တဲ့ အပတ်က LG ကနေ ကုမ္မဏီရဲ့ ဂုဏ်ယူစရာ အကောင်းဆုံးဖုံး G2 ထုတ်ပါတယ်။ ထူးခြားချက်က… အသံအတိုးအကျယ်ခလုပ် ဖုံးအနောက်ဖက် ကင်မရာအောက်တဲ့တဲ့မှာ ပါသဒဲ့ဗျာ…။
နိုကီယာကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့လ megapixel ၄၁ရှိ ကင်မရာပါတဲ့ Lumia 1020 ဖုံးအသစ် မိတ်ဆက်ပေးတယ်၊ လူအများစုအဖို့ အသုံးမဝင်တဲ့ အဲဒီဟာအတွက် ဒေါ်လာတရာ ဈေးပိုမြင့်သွားတယ်။
ထွက်ပြီးတလ ဖုံးဈေးကျ စမဖုံးဘွ မလှပ..
ဆမ်ဆောင်း ဂလက်ဆီS4ကတော့ အဆိုးဆုံး… မည်မည်ရရ ဘာမှအသုံးမကျတဲ့ မျက်လုံးကစားတာကို ဖုံးမှ ခြေရာခံလိုက်နိုင်တာမျိုး တိုလီမုတ်စတွေထည့်ပြီး ရှုပ်ယှက်ခပ်နေအောင် လုပ်ထားတယ်၊ ဘာမှ တကယ်တမ်း ပိုကောင်းလာတာလည်း မဟုတ်ဘူး…။
ဆက်ပြောရင် မဆုံးနိုင်ဘူး.. ဒီလောက်ဆို ဘာကိုဆိုလိုသလဲ သိလောက်ပါပြီ။ အရှင်းဆုံး ပြောရရင် “အားပါး” အော်ရအောင် သိပ်ကောင်းတဲ့ စမတ်ဖုံးမျိုး ယနေ့ခေတ်မှာ မရှိတော့ဘူး။ သူတို့အားလုံးသည် ဖုံးတခုမျှသာ ဖြစ်သွားပြီ။ မိုဘိုင်းလ်ခေတ်သစ် ဖုံးတွေမှာ လက်တဆုပ်စာ တိုလီမုတ်စတွေနဲ့ ပြီးသွားတော့မှာ…။
စမတ်ဖုံးဈေးကွက်ကို အခိုက်အတန့်အားဖြင့် ခြုံကြည့်လို့ ရသေးတယ်။ တန်ဖိုးမြင့် ဖုံးဈေးကွက် ပြည့်လုနီးပါး ဖြစ်နေတယ်.. ဖုံးအကောင်းစား ကိုင်နိုင်တဲ့သူဆို iPhone5 (သို့) HTC One ရှိထားကြတယ်။ ဈေးကွက်ထဲ နောက်လူဝင်ပြီး အက်ပဲလ်နဲ့ ဆမ်ဆောင်းဆီက ဝေစုလုဖို့ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပဲ။
ဒါကြောင့် နိုကီယာကုမ္မဏီသည် အဆင့်နိမ့် စမတ်ဖုံးဈေးကွက်ကို ပိုအားစိုက်တာ တွေ့နေရတယ်။ ဖုံးကုမဏ္ဏီနဲ့ ကန်ထရိုက် စာချုပ်ချုပ်ဖို့မလိုဘဲ ဒေါ်လာ နှစ်ရာသုံးရာလောက်နဲ့ ဝင်းဒိုး၈ဖုံးစနစ် ထည့်ပေးထားသေးတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ အက်ပဲလ်ရဲ့ အဖိုးနဲ အိုင်ဖုံး ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်း လာတော့မယ်၊ ဆမ်ဆောင်းလည်း ဈေးသက်သာတဲ့ ဂလက်ဆီ ဖုံးအမျိုးစားကွဲတွေ စီစဉ်နေပြီ။
ရှင်းအောင်ပြောရရင်… လူတွေက ဖုံးဝယ်နေတာရပ်မှာ မဟုတ်သလို ရှိတဲ့ဖုံးတွေ ညံ့တာလည်း မဟုတ်ဘူး..။ ဆိုလိုတာ စမတ်ဖုံး လားရာသည် ဆုံမှတ်တခု ရောက်နေပြီမို့ တခုထက် တခုသာအောင် ဟိုဟာထွင် ဒီဟာကြံ လုပ်နေတာ အဓိပ္ပါယ် မရှိနိုင်တော့ပါ။
မိုဘိုင်းလ်ဖုံး အသုံးပြုမှုတွေ ရပ်သွားမှာ မဟုတ်ပေမဲ့ ဒီစမတ်ဖုံးမှ ဟိုစမတ်ဖုံးမှ သဲသဲလှုပ် ဖြစ်နေတာတော့ ဆုံးခန်းတိုင်နေပါပြီ..။
ဟားဗကြောင်စင်း အိုင်တီနီးပြိန်ညံရှိန် ဦးကြောင်ကြီး
By Steve Kovach | Business Insider –
That’s not to say there haven’t been some great new devices. There have been plenty: The HTC One. The BlackBerry Z10. The Samsung Galaxy S4. The Moto X. They’re all really good phones, and you’d probably be happy buying any of them.
But despite all the marketing hype surrounding each phone, despite all the glitzy events, despite the months of executives openly teasing their next product, none of the devices launched this year have been the revolution they claimed to be. They’re all on parity with each other. Apple may have leapfrogged the competition with the introduction of the first iPhone in 2007, but since then, everyone else has caught up.
For most people, all of these devices do pretty much the same things. They let you run apps, browse the Web, watch video, check your email, and play endless rounds of Candy Crush. It doesn’t matter how much you paid or what kind of special features your phone’s manufacturer touts. It’s all the same these days. The concept ofa“smartphone” is dead.
As someone who watches the mobile industry so closely, it’s frustrating to see companies still try to do for phones what Apple did six years ago. It’s almost gotten absurd.
I could go on and on, but I think you get the idea. Simply put, the “wow” factor in today’s smartphones doesn’t exist. They’re all just…phones. It’s going to take more thanahandful of gimmicks to convince the public thatanew era in mobile computing has arrived.
Meanwhile, it’s worth takingalook at the overall smartphone market. The high-end of the market is nearing saturation, meaning just about everyone who wantsanew top-tier device like the iPhone5or HTC One already has one. It’ll be nearly impossible for another player to come in and whisk away the market share Apple and Samsung have already scooped up.
That’s why we’re seeing some companies like Nokia making bigger bets on the low-end of the smartphone market by producing phones that only costafew hundred dollars (withoutacontract from your carrier), yet still offer the full suite of features in Microsoft’s Windows Phone 8 operating system. It’s also why Apple will reportedly releasealow-cost iPhone later this year and why Samsung churns out several cheaper variants of its Galaxy phones.
To be clear: I’m not saying people are going to stop buying phones. (They won’t.) I’m not saying the phones companies release are bad. (They’re not.) I’m saying we’ve reached the point where all devices are pretty much the same, and it’s silly for them to try and differentiate themselves with useless gimmicks.
Mobile devices aren’t going away, but the concept ofa“smartphone” is dead.
သေတောင် သေပြီလား စမဖုံးရယ်။
သေသေချာချာတောင် မသုံးတတ်သေးဘူး။ :loll:
ကိုင်လိုက်တာနဲ့ ကောင်မလေး ၄ ယောက်လောက် ဝိုင်းလာတဲ့ ပီယ အပလီ ပါစမတ်ဖုန်းမျိုးမှ
“အားပါးးးး” လို့ အော်ပြီး အသိအမှတ်ပြုမယ်လားးး
ကရင်မလေးနဲ့တူအောင် ဂလက်ဆီပြောင်းကိုင်မလို့ဗျာ …
ကျောက်စ်ကတော့ ဖုန်းဆိုရင် စကားပြောဖို့နဲ့ ဓာတ်သေရိုက်ဖို့ပဲ သုံးတာမို့…
အိုင်တွေ စမတ်တွေ မသိဘူး၊ ဘလက်ဘယ်ရီတောင် မြင့်လှပြီ…
ငတေမာရင် ပီးရော … ခွီးးး
အာ့ဂျောင့် တမီး က အက်စ် အက်ဒဗန့်စ်လေးပဲကိုင်ဒါ
အခုထွက်ပြီးသားဖုံးတွေအားလုံး ပိန်မသာလိမ်မသာချည်းပဲ ဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ်…။
တချို့ဟာက တို့လို့ကောင်းပြီး တချို့ဟာက ပွတ်လို့ကောင်းတယ် ဆိုတာမျိုးပဲ လိုင်းခွဲပြီးပြောနေရတာ…။
တကယ်တော့ ဒါ့ထက် အသုံးကျတဲ့ ဖုံးမျိုး ကျုပ်စိတ်ကူးထဲမှာရှိတယ်….။
ကျုပ်ကတော့ ဒီတသက်သူဌေးမဖြစ်နိုင်တော့လို့ အဲဒီစိတ်ကူး အကောင်အထည်မဖေါ်နိုင်တော့ပါ..
(ဘာတဲ့… အသက်ငါးဆယ်မှာ မွဲရင် တသက်လုံးမွဲပြီ … ဆိုလား…)
အလားအလာရှိတဲ့ သားမက်ရခဲ့ရင် သူ့ကိုပဲ အိုင်ဒီယာပေးခဲ့မယ်စိတ်ကူးထားတယ်….
MEC ရဲ့  rightsarr technology အသစ်နဲ့ စမတ်ဖုန်းကတော့ ဝယ်တဲ့သူတိုင်း အားပါးတင်မဟုတ် အဘာား လို့တောင်အော်ယုံမက သတိပါလစ်သွားအောင် ပလီပလာတွေ ထည့်ထားမှမို့ မကြာမီ လာမည် မျှော်
စာရွက်တရွက်လိုခေါက်ထားပြီး.. ကြီးကြီးမားမားကြည့်ချင်.. ဖြန့်ကြည့်လို့ရတဲ့.. စမတ်ဖုံးလိုချင်မိတယ်..
ငါမအို.. အဲ..အဲ.. မသေသေး…
ပန်းသီးစခဲ့တဲ့ PC (Personal Computer)ရယ်…
ပန်းသီးစခဲ့တဲ့ iPod (Music Player) ရယ်…
ပန်းသီးစခဲ့တဲ့ iPhone (Smart Phone) ရယ်…
ပန်းသီးစခဲ့တဲ့ iPad (Tablet) ရယ်…
ပန်းသီးစခဲ့တဲ့ Macbook Air (Ultrabook) ရယ်…
နောက်ကို တခြားထုတ်လုပ်သူတွေလိုက်ပြီး… နှစ်ပေါင်းများစွာထုတ်လုပ်ရင်းက…
အခုအချိန်မှာ ၀တ်ဆင်လို့ရတဲ့ ကွန်ပျူတာတစ်မျိုးမျိုး ဘက်ကိုလှည့်သွားကြပြီထင့်…
ပန်းသီးကလဲ… နာရီရယ်လို့ အသံတွေထွက်နဲ့…
Smart Phone သေသွားပြီဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး…
Smart Phone ဆိုတာ Rock Music လိုပါပဲ… နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှင်သန်နေဦးမယ့်အရာတစ်ခုပါ…
ကဲ… ကြောင်နှစ်ကောင်တော့ သဘောထားစလွဲပြီ…